Xiddiga ay Man United ku dooneyso 100-ka Milyan ee Pogba oo maanta la kulmaya wakiilkiisa si uu….. – Gool FM
Xiddiga ay Man United ku dooneyso 100-ka Milyan ee Pogba oo maanta la kulmaya wakiilkiisa si uu…..
(Italy) 12 Luulyo 2016. Paul Pogba ayaa diyaar u ah inuu iminka go’aansado halka xigta ee uu u dhaqaaqayo maadaama uu soo idlaaday ka qeyb qaadashadiisa tartanka Euro 2016.
Manchester United ayaa aad u dooneysa inay dib ula soo saxiixato 23-jirka reer France waxayna doonayaan inay ka baxshaan lacago rikoodh ka noqon doona suuqa kala iibsiga 100-milyan oo bound.
Laakiin Pogba ayaa la sheegay inuu doonayo inuu u dhaqaaqo Real Madrid waloow kooxda ka dhisan La Liga ay dib u liqday xiisaheeda ku aadan xiddigan, Juventus ayaa iyana dooneysa inay ku qal-qaaliso Pogba inuu kooxda baaqi ku sii ahaado.
Jariiradda El Confidencial ee ka soo baxda dalka Spain ayaa sheeganeysa in Pogba uu la kulmi doono maanta wakiilkiisa Raiola si uu u qiimeeyo dooqyada miiska u saaran.
Jose Mourinho ayaa doonaya in wiilka reer France uu ka dhigto saxiixiisii afaraad lagana yaabee kiisii ugu dambeeyay uu suuqa kala soo wareego xagaagan isagoo eegaya inuu xoog dheeri ah ku soo daro qadkiisa dhexe.
Pogba ayaa bilaash kaga tagay Man United 2012-kii laakiin Red Devils ayaa iminka isku diyaarineysa inay beeso badan dib ugu soo celiso.
100-ka milyan ay Man United ku dooneyso Pogba waxaa dheeri u ah oo la warinayaa inay bixinayaan lacagaha komishinka ee wakiilkiisa Raiola ee 21-ka milyan iyagoona sidoo kale u gacan galinaya xiddig yaraha reer France adduun dhan 210,000 usbuuciiba oo ka madax bannaan lacagaha canshuuraadka.
Real Madrid ayaa iyana dhankeeda ka dooneysay Pogba horaantii xagaagan laakiin diyaar u ma ahan inay bixiso lacagaha ay Man United la diyaarka tahay oo kale.
El Confidencial ayaa warisay in tababare Zinedine Zidane uusan aad ugu qanacsanayn Pogba sidaa darteed ma dareensana inuu u qalmo lacagaha qaaliga ah.
Dhanka kale, The Times ayaa iyana warisay shalay in Juventus ay diyaarisay heshiis shan sano ah oo ku kacaya usbuuciiba 130,000 si ay Pogba ugu sii heyso horyaalka Serie A.
RASMI: Willian oo heshiis dheer qalinka ugu duugay Chelsea
Juventus oo saxaafadda u soo bandhigtay saxiixeeda cusub ee Miralem Pjanic…(Laacibka oo doortay No.5, isla markaana sheegay sababta uu Lambarkaas u xirtay)+SAWIRRO